Intern Blog: Nicole - Galveston County Food Bank
admin Disemba 2, 2021 0 Comment Imfundo yezondlo
Molweni nonke! Igama lam ndinguNicole kwaye ndingumfundi we-dietetic wangoku kwi-Galveston County Food Bank. Phambi kokuba ndiqale ukujikelezisa apha, bendicinga ukuba konke esikwenzayo kwisebe lezondlo ziiklasi zokufundisa ngezondlo. Ndenze izinto ezimbalwa endandicinga ukuba ziya kubandakanyeka kwiiklasi zesikolo samabanga aphantsi kwaye yayiyiprojekthi elungileyo ukuba ndisebenze kuyo! Bendicinga ukuba iyoyikeka into yokuba sifundise iiklasi phantse yonke imihla evekini, kodwa ibingeyonto bendizibona ndiyenza ixesha elide.
Emva kweentsuku ezimbalwa ndifunda apha, ndiye ndafumanisa ukuba isebe lezondlo apha kwindawo yokugcina ukutya lenza okuninzi kunoko. Ibhanki yokutya inezinye iiprojekthi ezimangalisayo abazenzileyo kwaye bafumana inkxaso-mali kule minyaka imbalwa idlulileyo. Enye yazo yiprojekthi yeHealthy Pantries, eyandinika ithuba lokuba ndifunde kwaye ndikhenkethe iipari ezibambiseneyo zebhanki yokutya kwindawo yonke. Umqeshwa ophetheyo, uKaree, wenza umsebenzi omhle kakhulu wokusebenzisana kunye neepantries ukufumanisa ukuba yintoni abangathanda ukuncedwa ngayo okanye indlela enye i-pantries enokuncedana ngayo. Umzekelo, iipantries bezinobunzima bokufumana imveliso.
Ukuze silungise lo mba, siye sajonga ezinye iinketho: ukucela iindawo zokutyela imveliso eseleyo, ukubhalisela umbutho ebizwa Ample Harvest apho umlimi wendawo anganikela imveliso eseleyo kwi pantries (umbutho emangalisayo non-ngeniso), njl Ngokutsho Karee, i-pantry nganye ibe nophuculo oluninzi kwiinyanga ezimbalwa ezidlulileyo! Ibhanki yokutya iphinde iphumeze iprojekthi ye-Senior Hunger ethumela ulwazi lwemfundo yesondlo kunye neebhokisi zokutya ezikhethekileyo kubantu abadala abahlala ekhaya.
Ndinikwe ithuba lokudala izinikezelo ezimbalwa zale projekthi, kwaye oku kwandivumela ukuba ndisebenzise izakhono zam zophando ngelixa ndiqhelisela ubuchule bokuyila. Ukwenza iiresiphi kwakukwayiprojekthi ezonwabisayo kwaye kwafuneka ndiyile kunye nezithako endandisikelwe umda kuzo. Ngokomzekelo, omnye ubandakanyeka ekusebenziseni i-Thanksgiving eseleyo njengeresiphi, ngelixa elinye lifuna ukusetyenziswa kweemveliso ezizinzile kwishelufu kuphela.
Ngexesha lam apha, ndiye ndabazi ngokwenene abasebenzi. Wonke umntu endithethe naye unentliziyo enkulu kubantu abadinga ukutya kwaye ndiyazi ukuba bachitha ixesha elininzi kunye nomzamo kwiiprojekthi abasebenza kuzo. Ixesha lam lokusebenzela apha lizise ifuthe elimandla kwisebe lezondlo kwibhanki yokutya; uphumeze iiprojekthi ezininzi ezintsha kunye notshintsho oluzise ulwazi ngesondlo kuluntu. Ndiyabulela ukuba ndifumene oku kujikeleziswa kwaye ndiyathemba ukuba ibhanki yokutya iya kuqhubeka nokwenza umsebenzi omkhulu wokusebenzela uluntu!
Lo ibingumsebenzi endiwenzele abantwana besikolo samabanga aphantsi! Ngaloo veki, sasifunda ngendlela izitiya zasekuhlaleni kunye nendlela ezityalwa ngayo iziqhamo nemifuno. Lo msebenzi uvumele abantwana ukuba bazivavanye ukuba ulinywa phi imveliso: iziqhamo kunye nemifuno zinokukhutshwa kwaye zincanyathiselwe emva kokuba zincanyathiselwe kusetyenziswa isincamathelisi seVelcro.
egqithileyo ngeposi Previous: Iibhlog zangaphakathi: IBiyun Qu
Okulandelayo elilandelayo: Umsebenzisi: Trang Nguyen